प्रथम डिभिजनमा एसएलसी पास... - Goraksha Online
दाङ, १ फागुन । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ काठेकोहलमा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक बसन्ता पौडेल ५२ पुगिन् । ५२ बर्षको लामो जीवनमा पौडेलसँग खुशी र दुःखका अनेक क्षण रहेका छन् । तिनै खुशीका क्षणहरुमध्ये केही क्षणहरुलाई हामीले गोरक्ष दैनिकको खुशी स्तम्भमा समट्ने प्रयास गरेका छौँ ।
उनै प्रधानाध्यापक पौडेललाई खुशीका पलहरु सुनाउन आग्रह गर्दा उनले पहिलो खुशीका रुपमा प्रथम डिभिजनमा एसएलसी पास गर्दाको क्षणलाई सम्झिइन् । त्यो बेला चेतनाको कमीका कारण छोरीेलाई पढाउने चलन थिएन । कमै मात्रामा छोरीहरुले पढ्ने गर्दथे । त्यो कम छोरीहरुको समूहमा म पनि पर्ने गर्दछु । मैले औपचारिक शिक्षा साविकको प्राथमिक विद्यालय धनौरीबाट गरे । त्यसपछिको ४ देखि १० कक्षासम्म सिद्धपृथ्वी जनता माध्यमिक विद्यालय श्रीगाउँबाट गरे ।
‘२०४२ सालमा कक्षा दशमा अध्ययन गर्ने १२–१३ जना विद्यार्थीहरु रहेका थियौं, त्यसमा छात्रा भनेको म एक्लै थिए’, उनले भनिन्– ‘कक्षामा एक्लै रहेकी मैले एसएलसीमा प्रथम डिभिजनमा एसएलसी गरे, प्रथम डिभिजनमा पास भएको रिजल्ट सुन्दाको त्यो क्षण मेरो जीवनको सबैभन्दा खुशीको क्षण हो । जुन क्षण सम्झँदा अहिले पनि खुशी लाग्ने गर्दछ ।’ उनका अनुसार त्यसपछि उनको गाउँदेखि विद्यालयमा नाम नै परिवर्तनजस्तै भयो । कसैले बलाउँदा होस् वा कसैसँग चिनाउँदा एसएलसी पास गरेकी केटी भनेर चिनाउन थाले । त्यो सम्झदा अहिले पनि खुशी लाग्ने गरेको पौडेलले बताइन् । पढाईमा पौडेल सधै प्रथम नै भइन् ।
एसएलसी पास गरेपछि उनले काठमाडौँमा रहेको अमृत साइन्स कलेजबाट आइएस्सी र पाटन मल्टिपल क्याम्पसबाट बिएस्सी पास गरिन् । त्यो बेला उनलाई आइएस्सी पढ्न तत्कालनी जिल्ला विकास समितिले दुई हजार रुपैयाँ छात्रावृत्ति प्रदान गरेको थियो । जुन साइन्स पढ्ने छात्राहरुको प्रोत्साहनको रुपमा दिने गरेको रहेछ । आइएस्सी पास गरेपछि २०४४ सालमा केही समय पौडेलले आफैले पढेको विद्यालयमा पढाउने अवसर समेत प्राप्त गरिन् । त्यो जागिरेका रुपमा भन्दा पनि आफूले पढेको विद्यालय र आपैmलाई पढाएका गुरुको आग्रहमा पढाएकी थिइन् । करिव ६–७ महिना माध्यामिक तहमा साइन्स पढाइन् । आफैले पढेको विद्यालयमा पढाउन जाँदाको त्यो क्षण खुशीको क्षण हुने नै भयो ।
त्योभन्दा पनि त्यो बेला आफैले पठाएका विद्यार्थीहरुले गुरुआमा भनेर सम्झँदा झनै खुशी लाग्ने गरेको बताइन् । ‘हुन त मैले त्यो बेला विद्यालयमा लामो समय पढाउन सकिनँ, छोटै समय पढाए पनि राम्रै पढाएको रहेछु’, उनले भनिन्– ‘त्यो बेला आफूले पढाएका विद्यार्थीहरुले अहिले गुरुआमा भनेर रेस्पेक्ट गर्दाको क्षण खुशी लाग्ने गर्दछ ।’ उनले त्यो बेला अहिले नेपाली कांग्रेस दाङका जिल्ला सचिव शंकर डाँगी, एपेक्स कम्प्युटर सेन्टरका सञ्चालक धर्म केसीलगायतका विद्यार्थीहरु रहेका थिए । त्यसको केही समयपछि तुलसीपुरमा रहेको तुलसी बोर्डिङ स्कुलमा समेत केही समय पौडेलले पढाएकी थिइन् ।
२०४९ सालदेखि जनता संस्कृत माध्यमिक विद्यालय बिजौरीमा साइन्स टिचरका रुपमा जागिर खाएर शिक्षण पेशा शुरु गरेकी पौडेलले घोराहीमा रहेको माध्यमिक विद्यालय रझेनामा साइन्स शिक्षक, शैक्षिक तालिम केन्द्र तुलसीपुरमा शिक्षक प्रशिक्षकमा रुपमा समेत काम गरेकी थिइन् । २०७० सालको असार महिनामा सरस्वती माध्यमिक विद्यालय काठेकोहलमा सुरुवा भएर आएकी पौडेल २०७१ सालदेखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहेकी छिन् । जिल्लाका अधिकांश विद्यालयहरुमा पुरुषहरु प्रधानाध्यापक भएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको समयमा आफूले एउटा विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएर विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउँदाको क्षण पनि अर्को जीवनको खुशीका रुपमा लिने गरेकी छिन् । ‘विज्ञान शिक्षकका रुपमा पढाउन आएकी मलाई विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पर्दा शुरुमा कसरी सञ्चालन गर्ने होला, सकिन्छ कि नाई भन्ने मनमा लागेको थियोे’, उनले भनिन्– ‘जिम्मेवारी पाएपछि सहजरुपमै चलाउँदै आएकी छु ।’
२०४९ सालमा कृष्ण पौडेलसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी पौडेलका दुई छोराहरु रहेका छन् । जसमा एउटा छोरा स्वदेशमै रहेका छन् भने कान्छा छोरा अमेरिकामा रहेका छन् । पौडेलको एउटा खुशीको क्षण भनेको कान्छो छोराले एमएड्को प्रथम बर्षको रिजल्ट सुनाउँदाको क्षण हो । त्यो बेला मैले सुर्खेतमा रहेको साविकको शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतबाट एमएड् गर्दै थिए । आफूले पढाउनुपर्ने भएका कारण विद्यार्थीसँगै व्यस्त हुने गरेका कारण रिजल्ट हेर्न पाएकी थिइन् । ‘एमएडको प्रथम बर्षको परीक्षामा म पास भएको कान्छो छोरा आयुस पौडेलले थाहा पाएको रहेछ’, उनले भनिन्– ‘उनले थाहा पाएपछि मलाई कतिबेला भनूँला भनेर घरमा फर्किएको थियो । म विद्यालय पढाएर घर फर्किदा घरको आँगनमा छोराले ममी पास हुनुभयो भनेर खबर सुनाएपछि खुशी साट्दाको त्यो क्षण पनि जीवनको बिर्सन नसकिने खुशीको क्षण हो ।’ पौडेलका अनुसार पास भएको खबर सुनेपछि आमाछोरा घरको आँगनमा सँगसँगै खुशीले नाचेका थियौं ।
२०२४ साल असार १३ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको टरिगाउँमा जन्मिएकी पौडेलको बाल्यकाल दंगीशरण गाउँपालिकामा बित्यो । अहिले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ को भरतपुरमा बस्दै आएकी पौडेलका श्रीमान कृष्ण पौडेल महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा सहप्राध्यापकका रुपमा रहेका छन् । पौडेल नेपाल शिक्षक संघका सहसचिव, दाङ जिल्ला विज्ञान शिक्षक समाजको अध्यक्षसँगै आफ्नै टोलमा रहेको हरियाली बचत समूहको पूर्व सचिव रहेरसमेत काम गरेकी छिन् ।